जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले डाक्याे साधारण सभा, के-के छन् एजेन्डा ?
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेकाे छ । ...
विहीबार, ०५ जेठ २०७९, ११ : ३०
छ्याङ्दी हाइड्राेको सेयर रजिष्ट्रार चयन
छ्याङ्दी हाइड्राेपावर कम्पनी लिमिटेडकाे सेयर रजिष्ट्रार परिवर्तन भएकाे छ । ...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा उर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने घाेषणा गरेका छन् । ...
बुधबार, ०४ जेठ २०७९, १५ : १७
आइएमई जनरल इन्स्याेरेन्सको लिलामी सेयर बाँडफाँड, कट अफ प्राइस कति ?
आइएमई जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वैशाख १२ गतेदेखि वैशाख २१ गतेसम्म लिलाम बढाबढ गरी बिक्री खुल्ला गरेकाे अवितरित हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरिएकाे छ । ...
बुधबार, ०४ जेठ २०७९, १३ : ४१
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आज (बुधबार) एक कम्पनीको बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । ...
बुधबार, ०४ जेठ २०७९, १३ : २१
नेशनल लाइफ इन्स्याेरेन्सको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
नेशनल लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ६४ लाख ४२ हजार ६८९.४९ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । ...
बुधबार, ०४ जेठ २०७९, ०८ : २५
मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा कारोबार रोक्का राख्ने नियम किन बनाईयो ? अहिले कत्तिको सान्दर्भिक ?
डाक्टर चिरन्जीवी नेपाल गभर्नर रहेका बखत राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली २०७३ को संसोधित संस्करण सम्बत २०७५ मा प्रकाशित...
मंगलबार, ०३ जेठ २०७९, १९ : ३६
चुनावपछिकाे पहिलाे काराेबार दिन : सेयर बजारमा भारी गिरावट
चुनावपछिकाे पहिलाे काराेबार दिन आज (मंगलबार) सेयर बजारमा भारी गिरावट देखिएकाे छ । ...
मंगलबार, ०३ जेठ २०७९, १५ : ०१
नेप्सेले माग्याे विन नेपाल लघुवित्तसँग ३ दिने स्पष्टिकरण, सेयर काराेबार राेक्का
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले विन नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडकाे काराेबार राेक्का गरेकाे छ । ...
मंगलबार, ०३ जेठ २०७९, १४ : २६
नेप्सेमा ६४ लाख ४२ हजार कित्ता बोनस सूचिकृत
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आज (मंगलबार) एक कम्पनीको बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । ...
मंगलबार, ०३ जेठ २०७९, १३ : ४९
कारोबार नचलेकोमा माफी माग्दै नेप्सेले निकाल्यो सूचना
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेले कारोबार नचलेकोमा माफी माग्दै सूचना प्रकाशन गरेकाे छ । ...
मंगलबार, ०३ जेठ २०७९, १३ : १२
मंगलबार, ०३ जेठ २०७९, १२ : १३
विन नेपाल लघुवित्तको लाभांश संशाेधन, घट्याे बाेनस
विन नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडकाे लाभांश संशाेधन गरेकाे छ । ...
मंगलबार, ०३ जेठ २०७९, ११ : १७
२ कम्पनीकाे सेयर लिलामीमा, कुनकाे कति ?
हाल बजारमा विभिन्न २ कम्पनीकाे सेयर लिलामी मार्फत् बिक्री भइरहेकाे छ । ...
सोमबार, ०२ जेठ २०७९, १२ : ४७
यी ६ कम्पनीको साधारण सभा हुँदै, कुनको के-के छ एजेन्डा ?
विभिन्न ६ वटा कम्पनीहरूले साधारण सभा आह्वान गरेका छन् । ...
सोमबार, ०२ जेठ २०७९, १२ : ०२
ब्याजदर नबढ्ने भएसँगै चम्कियाे सेयर बजार
लगातार चाैथाे काराेबार दिन आज (बुधबार) पनि सेयर बजारकाे उकालाे यात्रामा निरन्तरता देखिएकाे छ । ...
बुधबार, २८ बैशाख २०७९, १५ : ०५
राधी विद्युतलाई हकप्रद निष्कासन गर्न आयोगको अनुमति
विद्युत नियमन आयोगले राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडलाई हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति प्रदान गरेकाे छ । ...
बुधबार, २८ बैशाख २०७९, ११ : १८
नेप्सेमा ७९ लाख १९ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आज (मंगलबार) सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकाे सेयर सूचिकृत भएकाे छ । ...
मंगलबार, २७ बैशाख २०७९, १६ : २७
नेप्से उकालाे यात्रामै, के बजार लयमा फर्किएकाे हाे ?
आज (मंगलबार) पनि सेयर बजारकाे उकालाे यात्रामा निरन्तरता देखिएकाे छ । ...
मंगलबार, २७ बैशाख २०७९, १५ : २३
गाेर्खाज फाइनान्सले डाक्याे साधारण सभा, सेयरधनीकाे हात खाली
गाेर्खाज फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेकाे छ । ...
मंगलबार, २७ बैशाख २०७९, १२ : ५६
नेप्सेमा ५ लाख २० हजार कित्ता बोनस सूचिकृत
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आज (साेमबार) एक कम्पनीको बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । ...
सोमबार, २६ बैशाख २०७९, १६ : २६
लाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशनको सेयर स्वामित्व परिमार्जन
लाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन (नेपाल) लिमिटेडकाे संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । ...
सोमबार, २६ बैशाख २०७९, १६ : १३
साना किसान लघुवित्तको नाफा बढ्यो ईपीएस घट्यो, कस्ता छन् अन्य सूचक ?
साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेश्राे त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण प्रकाशित गरेको छ । ...
सोमबार, २६ बैशाख २०७९, ११ : ५१
शिखर इन्स्याेरेन्सकाे लिलामी सेयर भर्ने म्याद थप, अब कहिलेसम्म ?
शिखर इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वैशाख १९ गते, साेमबारदेखि लिलाम बढाबढ गरी बिक्री खुल्ला गरेकाे अवितरित हकप्रद सेयर भर्ने म्याद थपिएकाे छ । ...
सोमबार, २६ बैशाख २०७९, १० : २८
अडलट कारोबार नगर्न नगराउन ब्रोकर कम्पनीलाई नेप्सेको आग्रह
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले अडलट काराेबार नगर्न र नगराउन ब्रोकर कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेकाे छ । ...
आइतबार, २५ बैशाख २०७९, १८ : ०५
अब शुक्रबार पनि सेयर बजार खुल्ने, नेप्सेले निकाल्याे यस्ताे सूचना
जेठ महिनाबाट शुक्रबार पनि सेयर बजार खुल्ने भएकाे छ । ...
आइतबार, २५ बैशाख २०७९, १७ : ५६
हमाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएर आउँदा नायक फिल्मको अनिल कपुरजस्तो लागेको थियो
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमकी महासचिव तथा सक्रिय लगानीकर्ता दुर्गा तिवारीले नियामकहरुले पुँजी बजारको समस्या बुझे पनि नबुझे जस्तो गरेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेकी छन। ...
आइतबार, २५ बैशाख २०७९, १७ : ३१
मर्जरको सम्झौता गरेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर कसरी भयो नेप्सेमा कारोबार ?
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनेरल इन्स्योरेन्सबीच मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै दुवै कम्पनीहरुको कारोबार रोकिने भनिए पनि आज आईतबार एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको संस्थापक समूहतर्फको सेयर कारोबार भएको छ। ...
आइतबार, २५ बैशाख २०७९, १५ : ३०
जेठमा ब्याजदर नबढ्ने हल्लाले सेयर बजारमा चमक
साताको पहिलाे कारोबार दिन आज (आइतबार) सेयर बजारमा राैनकता देखिएकाे छ । ...
आइतबार, २५ बैशाख २०७९, १५ : २२
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले केही संस्थापक सेयरहरू बिक्री गर्ने भएकाे छ । ...
आइतबार, २५ बैशाख २०७९, १२ : ३६
धिताेपत्र दाेश्राे बजार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा यस साता विभिन्न ४ कम्पनीकाे सेयर सूचिकृत भएकाे छ । ...
शुक्रबार, २३ बैशाख २०७९, १६ : ४०
एभरेष्ट इन्स्याेरेन्सको सेयर काराेबार राेक्का
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा एभरेष्ट इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेडकाे सेयर काराेबार राेक्का गरिएकाे छ । ...
शुक्रबार, २३ बैशाख २०७९, १३ : १२
नेप्सेमा हिमालयन जनरल इन्स्याेरेन्सको सेयर काराेबार राेक्का
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हिमालयन जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेडकाे सेयर काराेबार राेक्का गरिएकाे छ । ...
शुक्रबार, २३ बैशाख २०७९, ११ : ५६
२ कम्पनीको साधारण सभा शुक्रबार हुँदै, के-के छन् एजेन्डा ?
विभिन्न २ वटा कम्पनीहरूले साधारण सभा भाेलि (वैशाख २३ गते, शुक्रबार) हुँदैछ । ...
विहीबार, २२ बैशाख २०७९, १७ : ४९
नेप्सेमा भारी गिरावट : लगानीकर्ता भन्छन्, "गभर्नरको बोलीको प्रभाव पर्यो"
आज (बुधबार) पनि सेयर बजारमा भारी अंककाे गिरावट देखिएकाे छ । ...
विहीबार, २२ बैशाख २०७९, १५ : ०२
नेप्सेमा ८ लाख ५६ हजार कित्ता ऋणपत्र सूचिकृत
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेमा आज बिहीबार एभरेष्ट बैंक लिमिटेडकाे ऋणपत्र सूचिकृत भएकाे छ । ...
विहीबार, २२ बैशाख २०७९, १२ : १६
नेप्सेमा ५ लाख ८२ हजार सेयर सूचिकृत
आज (बैशाख २२ गते बिहीबार) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा एक कम्पनीको बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । ...
विहीबार, २२ बैशाख २०७९, ११ : १३
रोकिएन नेप्सेको ओरालो यात्रा, गुड न्यूजकाे पर्खाइमा लगानीकर्ता
बुधबार, २१ बैशाख २०७९, १५ : ०१